Wariyaasha Somalida ee Nairobi oo lacag gaarsiiyey Abwaan Xasan Jaceyl+Sawiro – SBC
Wariyaasha Somalida ee Nairobi oo lacag gaarsiiyey Abwaan Xasan Jaceyl+Sawiro
Gudigii ay u xilsaareen wariyaasha Somaliyed ee Nairobi kusugan u gurmadka Xasan Jaceyl ayaa waxa ay gaarsiiyeen qeybtii labaad deeg lacag ah oo ay iska soo ururiyeen wariyayaasha Nairobi kuwooda shaqeeya.
Ka bilow Bidix(Prof. Dalxa, Xasan Jaceyl & Sahra Cabdi Amxed)
Deeqdan lacagta ah oo ay iska soo ururiyeen wariyayaasha ayaa gaareysay 1650 $ Doolar waxa si tabarucaad ah mushaaraad kooda uga jaray wariyaasha Nairobi iyadoo ay isku soo ururiyeen gudi loo saaray soo ururinta lagactaasi.
Gudigan oo loo xilsaaray soo aruurinta lacagaha oo ay ka midyihiin C.risaaq Xaaji Catoosh , Zahra Abdi Ahmed , Mohamed Garane Aadan, Mohamed Osman Newyork, Ubax Cabdi iyo C/qadir Cilmi Honest ayaa la dhihi karaa waxey dhaxda u xirteen sidi Xasan Jaceyl si deg deg ah loogu gurman lahaa iyagoo waqtigooda todobaadyadii la soo dhaafay ku bixiyey shirar iyo wicitaano wariyayaasha shaqeeya ee dagan magaalada Nairobi , waxaana ugu dambeyn maalmo yar ay ku guuleysteen iney lacagtaas soo aruuriyaan iyadoo 18 bishan gaarsiiyay lacago dhameyd 2000$ doolar waxa ayna wali wadaan gurmad kooda.
Taakuleynta taariikhiga ah ee loo sameynayo Xasan Jaceyl ayaa waxaa door muhiim ah ka geysanaya rugcadayaasha saxafada oo ay hormuud u yihiin Cali Muusi Cabdi, Yaasiin Ciise wardheere Maxamed Cadow, iyo dhamaan wariyaasha Nairobi, sidoo kale ururada dhaliyada oo ay SYAO kamid tahay ayaa iyaguna door muhiim ah ka geysanaya.
Xasan Jaceyl ayaa waxaa soo wajahay xanuunka macaanka, waxaana uu waayey lugtiisa midig oo looga jaray cisbitaalka, balsa imin ayaa xaaladiisa waxa ay tahay mid soo hagaageysa, niyadiisuna ay tahay mid sidii hore ka badala in kastoo uu muuqaal ahaan xasan jaceyl is badal weyn ku yimid, maadaama uu xubin kamid ah jirkiisa waayay.
Goobtii Xasan jaceyl lacagta lagu gudoon siinaya ayaa waxaa hadalo kooban ka jeediyay Max’ed Garane, Zahra Cabdi Ahmed, Pro. Dalxa, Ustaad Newyork, C/qadir Honest.
Wariye Sahra Cabdi Axmed
Maxamed Gaarane oo hadalka furay ayaa umahad celiyaya dhamaan wariyaashii ka qeybqaatay taakuleynta xasan jaceyl isagoo sigaar ah ugu mahad celiyay ururka SYAO, talafishinadii iyo websityadii doorka muuqda ka cayaaray, waxa uuna dhamaan wariyaasha kula dar daarmay is gacan qabashada mid kooda liita.
Wariye Catoosh & axaab kale
Prof. Dalxa ayaa isaguna ku amaanay gudiga doorka lama iloobaanka ah, waxa uuna kula dardaarmay dhamaan wariyaasha in ay is taakuleeyaan isagoo arintan ku tilmaamay mid taariikhi ah.
Max’ed Cisman Newyork ayaa wariyaasha kula dar daarmay in ay taakuleynta walaalkood ay qeybka qaataan meelkasta oo ay joogaan waxa uuna mahad gaar ah u celiyay dhamaan shaqsiyaadkii doorka ka qeystay kaalmeynta Xasan jaceyl.
Xildhibaan Sheekh Jaamac Xuseen dhanka midig
Ugu dambeyntii Xasan Max’ud Max’ed (Xasan Jaceyl) oo hadalo kooban jeediyay mahadcelib balaaran u jeediyay gudiga dhexda u xirtay sidii ay fariintiisa meel dheerv ugaarsiinlahayeen waxa uuna kula dar daarmay in ay howsha halkeeda ka siiwadaan.
Xasan jaceyl ayaa si gaar ah fariin ugu diray Dowlada isagoo yiri “ Waxaa masuuliyad idinka saran tahay bulshada Soomaaliyeed, keeda dhibateysan, iyo midkeeda liitaba waana in aad inta aad awoodaan wax u qabataan bulshada”, waxa uuna lacagtiina ka gudoomaya gudiga.
Gurmadkan taariikhiga ah ayaa waxa uu wax weyn ka badalay dareenka iyo niyada Xasan Max’ed Max’ud (Xasan jaceyl) waxa uuna yahay kii labaad oo mudo bil gudaheeda loogu ururiyay lacag gaaareyso 3650 $ Doolar.
Wixii warbixin ama ka qeyb qaadasho howshasocota ah kala xiriir telephan-ka +254717134593
Ahmed Muse Gure
SBC international Nairobi Kenya